Difaaca PSG ee Achraf Hakimi oo shaaciyay dabeecadda uu la yaabay ee uu leeyahay Lionel Messi – Gool FM
(Paris) 27 Sebt 2021. Difaaca dadabka midig kaga ciyaara naadiga Paris Saint-Germain ee Achraf Hakimi ayaa sheegay inuu xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Lionel Messi uu leeyahay dabeecad uu aad ula yaabay taasoo ka duwan dhammaan xiddigaha kale ee PSG.
Sidoo kale, Hakimi ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka garab ciyaaro xiddiga ku guuleystay lixda jeer abaal-marinta Ballon d’Or sidoo kalena ay ahayd riyo isaga u gaar ah.
“Inaad xiriir farsamo aad isaga la dhisto waa mid sahlan, kubadda ayaan u dhiibaa, waan ordaa isaguna waxa uu dhigaa halka ay leedahay” ayuu yiri difaaca xagaagan kusoo biiray naadiga Paris isagoo la hadlayay L’Equipe.
“Waxa aan la yaabay qaabka uu u dhaqmo, waa mid dabacsan oo deggan.
“Waxaan lasoo ciyaaray ciyaartoy dhowr ah oo waaweyn, ciyaaryahanka kaliya ee aan tabaayayna waxa uu ahaa Messi, waan ku faanayaa inaan la macaamilo xiddig sidan u weyn” ayuu hadalkiisa sii raaciyay difaaca reer Morocco.
Messi iyo Hakimi ayaa xagaagan kusoo wada biiray naadiga PSG iyadoo 34-sano jirka reer Argentina uu bilaash kaga soo dhaqaaqay Barcelona kaddib markii ay awoodi weysey inay qandaraaska u kordhiso maadaama uu dhacay dhammaadka xilli ciyaareedkii hore.
"Man United kuma guuleysan karto Premier League xitaa iyadoo heysata Cristiano Ronaldo" - Xiddig hore ugu soo ciyaaray Red Devils